Diyaarad ay saarnaayeen 6 qof ayaa ku baaba'day Bariga Fog ee Ruushka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Diyaarad ay saarnaayeen 6 qof ayaa ku baaba'day Bariga Fog ee Ruushka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Diyaaradda Wasaaradda Degdegga ah ee Ruushku waxay ka baxdaa radarada duulimaadyada ee ku wareegsan dhulka Khekhtsir Reserve Reserve ee gobolka Khabarovsk ee Bariga Fog ee Ruushka.
Diyaaradda Antonov An-26 ee Wasaaradda Gurmadka ee Ruushka ayaa laga waayay raadarada duulimaadyada ee u dhow Khabarovsk.
Diyaaradda waxaa saarnaa shaqaale duulimaad oo ka koobnaa lix qof waxayna ku socotay duulimaad farsamo.
Baadhitaannadu way murugsan yihiin mugdiga iyo cimilada aan wanaagsanayn, sida ay sheegtay adeegga saxaafadda ee wasaaradda.
Adeegga saxaafadda ee Wasaaradda Gurmadka Degdegga ah ee Ruushka ayaa xaqiijisay in diyaaraddeeda An-26 ay ka luntay raadarada duulimaadyada 38 kiiloomitir (23.5 mayl) garoonka diyaaradaha magaalada Khabarovsk, agagaarka dhulka Khekhtsir Nature Reserve ee gobolka Khabarovsk ee Bariga Fog ee Ruushka.
Diyaaradda waxaa saarnaa shaqaalihii diyaaradda oo ka koobnaa lix qof waxayna ku socotay duulimaad farsamo, sida ay sheegtay adeegga saxaafadda.
“11:45 waqtiga Moscow, Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka ee Wasaaradda Gurmadka ee Ruushka ee gobolka Khabarovsk ayaa heshay farriin ah in Antonov An-26 diyaaradood ayaa laga waayay raadarada duulimaadka 38 km u jirta gegida diyaaradaha ee magaalada Khabarovsk, waxaana loo malaynayaa aagga Khekhtsir Nature Reserve. Marka la eego xogta horudhaca ah, waxaa saarnaa shaqaale diyaaradeed oo ka koobnaa lix qof, ”ayay tiri adeegga saxaafadda oo intaas ku dartay in diyaaradda ay wadday duulimaad farsamo.
"Baadhitaannadu way murugsan yihiin waqtiga mugdiga ah ee maalinta iyo xaaladaha cimilada ee aan wanaagsanayn," ayay raacisay wasaaraddu.
In ka badan 70 samatabbixiyeyaal iyo helikobtar sahan ah ayaa la geeyay goobta laga shakisan yahay inay shilka ka dhacday.
Shilalka ku lug leh diyaaradaha burburay ee duurjoogta iyo fog ee Ruushka Bariga fog weli aad bay u badan yihiin.
Bishii Ogosto, sideed qof ayaa dhintay markii diyaarad helicopter ah oo nooceedu ahaa Mi-8, oo ay saarnaayeen 16 qof, ay ku dhacday haro ku taal gacanka Kamchatka ee fulkaanaha sababo la xiriira aragti-xumo.
Bishii Luulyo, diyaarad ay la socdeen 22 rakaab ah iyo lix shaqaale ah ayaa shil gashay xilli ay doonaysay inay ku degto Kamchatka, iyadoo aysan jirin cid ka badbaaday shilkaas.
Antonov An-26 (Magaca warbixinta NATO: Curl) waa matoor matoor turboprop rayid ah iyo diyaarad gaadiid militari, oo loogu talagalay laguna soo saaray Midowgii Soofiyeeti laga soo bilaabo 1969 illaa 1986.
An-26 ayaa sidoo kale lagu soo saaray Shiinaha iyada oo aan laysan heshiis shati ah oo ay samaysay Xian Aircraft warshaddii Y-14, markii dambe la beddelay si loogu daro taxanaha Xian Y7.